I-Pinfluencer: Ukumaketha kanye ne-Analytics kusuka ku-Pin kuya ekuthengeni | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 2, 2012 NgoMsombuluko, Mashi 4, 2013 Douglas Karr
Izinkampani zithole imiphumela emangazayo zisebenzisa Pinterest ukukhulisa ukufinyelela kwabo kwezentengiso. Njenganoma iyiphi ipulatifomu yezenhlalo, iPinterest inezindlela zayo ezinhle zokumaketha, amathuba omkhankaso kanye nabathonya.
I-Pinfluencer kuyinto ukumaketha futhi analytics ipulatifomu ehlangana neyesayithi lakho analytics ukukunikeza imbuyiselo kudatha yokutshalwa kwezimali. Bangeze okusha Ipulatifomu yokuphakanyiswa kwePinterest lokho kukusiza ukuthi ubambe ukukhushulwa ku-Facebook, ukhethe ezinhlotsheni eziningi zomncintiswano futhi ulandele ukufinyelela nemali engenayo.
Lapho umsebenzisi efaka isithombe ebhodini lePinterest, kungaba yinoma yini kusuka kusisho esilula sokunambitheka komuntu kuya ekuvunyelweni okuqondile komkhiqizo. Noma ngabe yisiphi isizathu, isenzo ngemuva kwephini sinezimfanelo eziningi ezingaba wusizo kumkhiqizo. Kepha sikholwa ukuthi okubaluleke kakhulu ukuthi: iphini lenza indlela yokuthenga. I-Pinfluencer blog
I-Pinfluencer inikeza izici ezilandelayo:
Izikhonkwane eziphezulu shazi - I-Pinfluencer ilandelela izikhonkwane zakho ezinegciwane futhi ezihehayo - kusuka kuwebhusayithi yakho nasemabhodini. Bona ukuthi yikuphi okuqukethwe okuzwakala kakhulu nokuthi umhlaba usabela kanjani kukhathalogi yakho.
Amabhodi aphezulu we-Viral - I-Pinfluencer ikhomba amaphuzu wokuzibandakanya kuwo wonke amabhodi akusiza ukuthi uphendule ukuthi imaphi amabhodi anegciwane elikhulu futhi ahehayo futhi ikusiza ukuthi unqume ukuthi yimaphi amabhodi ozogxila kuwo. Ngokubheka nje bheka iphinikhodi ethandwa kakhulu kulelo bhodi.
Competition - Ngabe uthola izikhonkwane neziphindo eziningi kunomncintiswano wakho? Yimiphi imikhiqizo namabhodi esincintisana nawo aziwa kakhulu ku-pinterest?
Izinkomba Zomsebenzi Oyinhloko - Linganisa i-Pinterest Brand Engagement yakho ngezikhonkwane / ngosuku, Abalandeli / Usuku. Sebenzisa i-metric virality ye-Repins / Pin ne-Clicks / Pin ukushayela ukuzibandakanya. Imali engenayo / iphini ibeka amandla emali engenayo kusuka kuzikhonkwane.
Tags: umabhebhanaPinterestizibalo ze-pinterestumncintiswano we-pinterestukukhushulwa kwe-pinterest
Nov 3, 2012 ngo-2: 56 AM
Ngiyabonga ngalokhu, angiyena umlandeli we-pinterest kepha kufanelekile ngendlela ende yokuthola ukuthengisa? 🙂 Ngizoyizama nakanjani le.